Caadooyinka xun ee soo afjari kara lamaanaha | Bezzia
Maria Jose Roldan | 05/04/2021 22:00 | Xiriirka
Waa wax iska caadi ah in labada lamaane la adkeeyo oo waqtiga la dego, taxane caadooyin xun xun ayaa la abuuray oo aan u fiicnayn mustaqbalka wanaagsan ee lamaanaha. Marka hore, caadooyinkani waxay noqon karaan kuwo aan muhiim ahayn, si kastaba ha noqotee, waa in la sheegaa in muddo ka dib midowga dadka noocaas ah uu si tartiib tartiib ah u kala bixi karo.
Haddii caadooyinka noocaas ah aan lagu joogsan waqtiga, waxyaabaha muhiimka ah ee lammaanaha dhexdooda ah ayaa waxyeello loo geysan karaa sida ku saabsan kalsoonida ama ixtiraamka. Si aysan taasi u dhicin, waxaa muhiim ah in la aqoonsado caadooyinkaas oo la joojiyo. Halkan waxaa ku yaal tusaalooyin ka mid ah caadooyinka xun ee ku dhici kara xiriirka.
2 Jiritaanka ciil
3 La dagaalanka fagaarayaasha
4 Sasabasho la'aan
Isbarbardhiggu had iyo jeer waa nacayb waana inaad ka fogaataa inaad si joogto ah ugu dhex isticmaasho lammaanaha dhexdooda. Qof kastaa wuxuu leeyahay ceebaha uu leeyahay iyo wanaaggiisa marka looma baahna in la isbarbar dhigo. Laguguma talin karo isbarbardhiga togan inuu yahay midka xun.
Lamaanaha dhexdooda wax ciil ah ma dhex mari karo haddii ay jiraanna, waxaa lagama maarmaan ah in lala hadlo lamaanaha si wax loo xalliyo. Ma mudna in la cafiyo qofka kale haddii aan laga samayn qalbiga. Nacabku wuu aasay mana xallin, wuu weynaanayaa waqti ka dib wuxuuna sababayaa cilaaqaad qatar ah.
La dagaalanka fagaarayaasha
Ku dagaallanka shisheeyaha hortooda waa mid ka mid ah caadooyinkaas xun ee ay tahay in laga fogaado mar walba. Dhibaatooyinka kala duwan waa in lagu xaliyaa asturnaanta oo aan lagu xallin dadweynaha. Waa caado sii kordheysa oo ku sii kordheysa lamaanayaal badan oo maanta jira.
Waa wax iska caadi ah oo caadi ah in sannadaha ugu horeeya ee xiriirka, labada qofba ay amaan ka helaan lamaanaha. Qof kastaa wuxuu jecel yahay in qofka uu jecel yahay u hibeeyo ereyo wanaagsan oo jacayl ah iyo bogaadin gaar ah. Nasiib darrose, markii waqtigu dhammaado, bogaadinnada noocan ahi way yaraadaan oo labada qofba way ka fikiri karaan marwalba inaysan u soo jiidanayn lamaanaha.
Arrinka masayrka ka dhex jira lamaanaha waa arrin xoogaa khiyaano ah. Xaasidnimada waqtiyada qaarkood waa wax loo qaadan karo mid caadi ah oo aan laga walwalin. Si kastaba ha noqotee, haddii masayrku sii socdo oo uu u horseedo dhibaato culus oo ku filan, waxay khatar gelin kartaa xiriirka. Masayrku waligiis caado xun kuma noqon karo labada lamaane dhexdooda.
Gaaban, caadooyinka noocan ahi uma fiicna lamaanaha. Waqti ka dib, caadooyinka noocan oo kale ah ayaa baabi'in kara lammaanaha qofka. Caadaysigu waa inuu ahaadaa sida ugu macquulsan uguna macquulsan si loo hubiyo in isku xidhka labada qof uu noqdo mid xoog badan oo jacaylku ka adkaado nooc kasta oo dhibaato ah. Waa inaad taqaanaa sida loo daryeelo lamaanaha oo aad xal ugu hesho dhibaatooyinka kala duwan ee ka dhalan kara dhibaatooyinka kala duwan ee ka dhex dhalan kara dhexdeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha » Xiriirka » Caadooyinka xun ee soo afjari kara lamaanaha
Sida loogu qurxiyo qolka fadhiga dhirta